အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: March 2008
ရေစီးနဲ့ ကူးနေတဲ့ ငါးသုံးကောင်
တတိယ သော ငါး..
လှေစောင်းခိုက်မှာ လွန့် လူး.
ခုန်ချမြစ် ထဲ ရေဆင်းကူး
အခွင့်ကောင်းစောင့်ကြ ခလေးတို့ 
မြွေပွေးပမာ ပါးပြင်းထောင်ကြစို့့
လေတိုက်ပြင်း ပို ခံရတတ်တယ်..
မြင့်လွန်းတဲ့ သစ်ပင်သို့ .
မုန်တိုင်းဒဏ် ညီမျှခံကြပါစို့ 
ဝှက်ကာထား..အားအင်များ လိုရင်သုံးဖို့ 
အစွမ်းသတ္တိထယ်ထယ်..လောင်ရှိန်ပြင်းပြင်း ပူသို့ 
ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကြွယ်ကြစေဖို့ 
မီးစပွင့် ကလေးများ၏ စုပေါင်းအား..
သံမဏိသားများ ကို တောင်..
အရည် ပျော်စေနိူင် သကဲ့သို့ 
အရှေ့ က ပန်းတိုင်
ပြိုင်တူ ဆက်လက်ချီတက်ကြပါစို့ ။
မသဒ္ဓါ ( ၃။ ၂၆။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:35 PM 1 comments
FREEDOM WALKER'S ဒိုင်ယာရီ.. ( ၃။၂၆။ ၂၀၀၈)
၃။၂၆။ ၂၀၀၈ တွင်. Twin Falls (Idaho) မှစထွက်လာပြီး. Route 84 အတိုင်း ချီတက်နေပါသည်။ ရာသီဥတုမှာ အင်မတန် ဆိုးဝါးနေပြီး နှင်းမိုး များ အဆက်မပြတ် ရွာချနေပြီး ရပ်နားစရာမရှိပါ.။ ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်၏ အပူချိန်မှာ (3˚) C သာရှိပါသည်.။ ခြေ လက်များ ထုံကျင်နေပြီး အလွန်ချမ်းအေးမှူဒဏ်ကို ခါး စီး ခံစားနေရပါသည်။
အံခဲဇွဲနှင့် ဖြတ်သန်းနေပြီး..နောက်ရှေ့နားရပ်မှာ..Kimberly တွင် စခန်းချနိူင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤ ၈၈ စစ်ကြောင်း၏ စစ်သည်များ အား အဆင်ပြေပြေ ဖြတ်ကျော်နိူင်ပါစေရန် အားလုံး မှ ဝိုင်းဆုတောင်းပေး ကြပါရန်..မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:11 AM0comments
သမင်လည်ပြန် ကြည့်..သင် ဘာလုပ်သင့်သည် ကို
ဇာတိမာန်နဲ့တပ်မတော်သားများ..
မျိူးချစ်တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ 
နယ်တလက်မ..ထိမှ နယ်ချဲ့ မဟုတ်
ပေါပေါနဲ့..လုပ်အားခ အညွန့် ခူး.
ကုလားကြီး ကို အကျောဖြေ။
ယိုးဒယားကြီးရှေ့ တိုင်ပတ်ပြီး ကပြရနေ
ရေဒါနဲ့ မိုးပေါ်ထောင် လျှောက်မကြည့်နေနဲ့ ..
တအိအိနဲ့လောက်တက်စား..
ဘာမဲမှ ဒို့ မလို..ရဲ ဖို့ ဘဲလိုတယ်။
ဗျာဓိ မကြောက်.. မရဏကြောက်.
စစ်သည်တို့ ၏ သစ္စာအဓိဌာန်ချက်
“ငါတို့သည် နိူင်ငံတော်နှင့် နိူင်ငံသားတို့ ၏ သစ္စာကို
မေ့ မသွားနဲ့ ..
သွေးနဲ့ ဆပ်တောင် မကြေတတ်ဖူး။
စစ်သည်တို့ ရဲ့..အားကိုပြကြပါစို့ 
စစ်သည်ကောင်းရဲ့ ပြည်သူ့ ထံသို့ သစ္စာရည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:59 AM0comments
သပိတ်သာ မှောက်ကြပါ..ပီကင်း အိုလံပစ်
ကိုမျိုးမှ မေတ္တာ ဂရုဏာ ဖြင့် ခံစားပေးပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:33 PM0comments
့မြန်မာနိူင်ငံ ၏ လွတ်လပ်ရေး နှင့် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် သင့်လက်မှတ် ကလေးများမစကြပါ။ သင် မလျှောက်နိူင်သော..မိုင် ၃၀၀၀ ခရီး ကို..သတ္တိရှိသူများ သင့် အစား လျှောက်နေကြပါသည်။ လူကြီးမင်းများ လက်ခူတ်တီးရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:11 AM0comments
ရေသာ..လျှင် ပါစေဖို့ 
ရေအိုးနဲ့ ဘဲ ခပ်ခပ်..
ရှိတာနဲ့သုံးပေး..ဥာဏ်ရည်သွေးကြ
အမောပြေ ရေရဖို့ သာ အလေးပေးမှ။
ငိုတဲ့ခလေး နို့ စို့ ရရေးဘဲ
မငိုတဲ့ ခလေး..နို့ မစို့ ရ..
စိတ်ပျက် အားငယ်ဖို့ မလိုဘူး
ကြောက်ရွံ့ နောက်တွန့် ဖို့မလိုဘူး..
မလိုဘဲ မထုတ်နဲ့ 
ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်..ဘယ်နေရာ..မသိစေရ..
ဟိုဒီ မီးပွါးများ. ပြိုင်တူစ
ဘယ်တော့မှ ဒို့ မရှုံး
ကလောင် ထက်ထက် နဲ့ တိုက်သူက တိုက်..
ဟောလီဝုဒ်မီဒီယာ ဆွဲထဲ့..ရမ်ဘိုနဲ့ဆွဲဖဲ့ ခဲ့လျှင်။
ကိုယ်နိူင်ရာ တပိုင် တနိုင်
စေတနာ.လှိုင်လှိုင်နဲ့လုပ်ကြ။
မှန်ကွဲ တစ်စ..ဓါးသွား မြမြ
သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရေး..
ဒို့့မြတ်နိုးတဲ့ သာသနာ မကွယ်ရေး..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:10 AM0comments
ခင်မင်လေးစားရပါသော ညီတော်၊ညီမတော်၊အစ်မတော်၊အစ်ကိုတော်၊ ရဲဘော်၊ရဲမေအပေါင်းတို့ အား ကျွန် တော် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တောင်း ဆိုပါသည်။
လေးလေးနက်နက်ဝိုင်းဝန်း၍ ကူညီပေးပါရန်လည်း အနူးညွတ်ထားပြီး ပြောကြားလိုပါသည်။ ဘာလိုလည်း ဆို တော့ အချိန်တွေသည် မြန်မြန်ကြီး ကုန်သွားသည်မှာ ၈၈ အရေးခင်းမှာမနေ့ ကကဲ့သို .. ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ မနေ့ကကဲသို့စက်တင်ဘာ ဆိုသည်မှာမနေ့ ကကဲ့သို့ ...မနေ့ ကကဲ့သို့ သောကဲ့သို့ များ ကုန် သွား နေပေသည်။ စစ်အစိုးရက တိုက်ပွဲခေါ်လိုက်ပြီ ၊ ခေါင်းငုံမခံနဲ့ လက်တုန်ပြန်ကြစို့။ စစ်အစိုးရ ကမေလ မှာ အခြေခံဥပဒေကို ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပဖို့ ကြေညာ လိုက်ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ ၂၀၁၀ မှာ ပြုလုပ် မယ် လို့အေပီသတင်း မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရဟာ အာဏာကို တလက်မမှ မလျော့ဘူးလို့ မျက်နာ့ ပြောင်တိုက် ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
၂- ဆန္ဒခံယူပွဲ ကို ၁၉၇၂ ခုနစ်တုံးကလို ပဲ လက်ပိတ်ကြည့် နေမလား
၄ သေနဂ္ဂဗျုဟာ၊ ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလည်း၊ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကိုလုပ်ရတော့မယ်၊
" ကျွန်တော်တို့ ဒါကို လုပ်ချင်တယ်၊လုပ်မယ်ဆိုသော ၊ဒါ ကျွန်တော်တို့ ရဲ လုပ်ကိုလုပ်မှာ၊လုပ်မယ် " ဆိုသော စကားကိုပြောရမယ့် အချိန် ရောက်ပြီ လို့မြင်ပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့ တာဝန်က ဒီမိုကရေစီအောင်လံကို လက်ဆင့်ကမ်းကာသယ်ဆောင်ရမယ်၊ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ တာဝန် က သယ်ဆောင်ရမှာ၊ လွဲပြောင်းပေးရမှာ၊ ပေးရမဲ့ သူက ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပြေးရမဲ ၁၉၉၀ ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သောပါတီတွေအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့ သောတာဝန်ယူခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်းမျိုး ကို ဒီပါတီတွေကို တာဝန်ခံခိုင်းဖို့ သိုင်းဝိုင်း၊ ၀ိုင်းဝန်း ပံပိုးရမှာကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ တာဝန်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန်၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့တာဝန် ပြန် လည်ကြရောက်လို့ လာပါပြီ၊
တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ရရမည်ဟု ကြွေးကြော်ရင်း ဖဆပလသည် လုပ်ဆောင်၏။ မှန်ပါသည်။
ထိုအတူ တနှစ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီကို ရရမည်ဟု ကြွေးကြော်ရင်း NLD က လုပ်ဆောင်သင့်သလို အားလုံး သော ပြည်သူတွေ၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်း အသီးသီး၊ လက်နက်ကိုင်အသီးသီး မားမားမတ်မတ် ရပ် သင့်ပြီ ဟုလိုကြောင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် တောင်းဆိုပါသည်။
အားလုံးကဒီမိုကရေစီ၊ ပြည်သူကတင်မြှောက်သော ပြည်သူ့ အစိုးရကို အကောင်အထည်ပေါ် ရန် ၁၀၀% တာဝန်ရှိသူနှင့် အပြည့်အ၀ပံပိုးရပ်တည်ပေးရမည်မှာပြည်သူတွေ၊ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့စည်းအသီးသီး၊ လက်နက် ကိုင်အသီးသီးဖြစ်ပြီး၊ ထိုအားကို အခြေခံပြီးတော့မှသာ NLD သည်ပန်းတိုင်ကိုချီတတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအ တွက် ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာလုပ်စရာတစ်ခုဘဲရှိပါတော့တယ် ကျွန်တော်တို့ ဘာကို လုပ် မယ်ဆိုတာဘဲပြောဖို့ ရှိတော့တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်က အလံကိုသယ်သွားပြီး ၁၉၉၀ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲ မှာအောင်ပွဲရသောအနိုင်ရပါတီလက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ရမယ်၊ အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆာင်တွေ၊ ရွေးချယ် ခံရသောပါတီခေါင်းဆောင်တွေကနေ ဆက်ပြီးတော့ သယ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။
ဒါကို ပြည်သူတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေက၊ ပြတ်ပြတ်သားသား ၀ိုင်းဝန်းပံပိုးရမယ်၊ ဒီလိုလုပ်ပြီး NLD ကို အခွင့်ရေး ပေးကို ပေးရမယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပြည်သူတွေကနေ NLD ကိုတိုင်းပြည်ရဲ ကံကြမ္မာ ကိုလုပ်ဆောင် ပေးဖို့ mandate ပေးထားလို့ ဆက်လက်ပြီး တော့၊ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးသင့် တယ်၊ ပေးကို ပေးရမယ်ဆိုတာကို ထို့အတူ ဘလောဂ့် ညီအစ်ကိုတွေကနေ အားလုံး တူညီသော အခြေအနေကို ၀ိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တယ် ဆိုတာ တောင်းဆိုပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့ တွေ ဒီတစ်ခါမှ ညီညာသောခြေလှမ်း၊ စွန့် လွတ် အနစ်နာခံခြင်း၊ အကြွမ်းမဲ့ ယုံကြည်မှုကို တစ်ဦး အပေါ်မှာ တစ်ဦးမထားဘဲ နေကြအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မမြင်ရသေးသောအားလုံးသော နောင်မျိုး ဆက် တွေရဲ့ဘ၀ဟာ ယခုထက် ပိုပြီးဆိုးဝါးနိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သတိပြုမိကြစေချင်ပါသည်။
ခင်မင်လေးစားရပါသောညီတော်၊ညီမတော်၊အစ်မတော်၊ အစ်ကိုတော်၊ ရဲဘော်၊ ရဲမေအပေါင်းတို့ ထံမှ ထိရောက် သောအလုပ်၊ ထိရောက်သောအတွေး၊ အမြင်အားလုံးကို ပြန်ကြားပေးစေလို ပါတယ်၊
၂၀၀၈ နှစ်မကုန်ခင်မှာ ရွေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအောင်ရမည်၊
ဒေါင်းအလံကျောင်းဝင်းတိုင်း မှာပြန် စိုက်နိုင်ရမည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:43 AM0comments
မိုင်၃၀၀၀ ခရီးလှမ်းတဲ့ မောင်ငယ်လေးတွေ
ကိုယ်လက်တွေ နာကြင် ကိုက်ခဲနေ.
တလှမ်းချင်းလျှောက်..တရွေ့ ရွေ့ သွား..
အားအင် ခင်းရမဲ့ ခရီးလမ်း။
(၂) ပေလျှင် တစ်လှမ်းနှုံးလှမ်း။
တစ်မိုင် ဆို ခြေလှမ်းပေါင်း (၂၆၄၀)
၃၀၀၀ မိုင်မှာ..(၇,၉၂၀,၀၀၀) သော ခြေလှမ်း..
မာန်အားနဲ့ ချီတက် ပိုင်ပိုင်..
တနေ့ တလံ ပုဂံ ဘယ်ပြေးမလဲဆိုတဲ့ စကားပုံ.
ယောက်ျားကောင်း ဇွဲလုံလ စုံရင်..မှန်ကန်ရဲ့.
သေခါမှသာ..ဇွဲ လျှော့ကြစို့ ရဲ့။
ဒါ..မြန်မာတို့ ရဲ့ ဇွဲ..
မသဒ္ဓါ ( ၃။၁၉။၂၀၀၈)
လမ်းလျှောက်နေသော..ခလေးနှစ်ဦးအတွက် မကြီးသဒ္ဓါမှ မုံ့ ဘိုး ပေးလိုပါသည်။ မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကို သိလိုပါသည်။ နေထိုင်မကောင်းလျှင်..ကားနှင့် အနီးကပ် ကူညီစောင့်ရှောက်သူရှိမရှိ..သိလိုပါသည်။ သိသူများရှိက ဆက်သွယ်ပေးပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:43 AM0comments
ရဲရဲ သာပြ….ပြည်သူ့ ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒ.
ကိုယ်ဖက်..ကိုယ်ယက်ပါတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ..
သူဘဲ ပုဏ္ဍား..သူဘဲ မိန်းမ၀န်
သူဘဲ စစ်သူကြီး..သူဘဲ ကုန်သည်
သူဘဲ ခွေးလှေး ဂျပ်ိုး။
နိူင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ ဒု-သမ္မတ
ရွေးချယ်တင်မြောက်သူ မဖြစ်လည်း ရ..
အနှစ် ၂၀ ပြည့်ဝအောင်..ပြည့်သူ့ ဘဏ္ဍာခိုးစား
ပြည်သူ မတင်မြှောက်ဘဲ.. သမ္မတတက်လုပ်ရဲ
ဒင်းတို့ မိ်ု့ ...အရှက်ဘဲ..ရှိရှိကြဘူးတော်..
၂၅% သော.လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်..
မဲရွေးစရာမလို..သူ့ အမျိုးဖြစ်ဖို့ သာလို
၀န်ကြီးဌာနအမျိုးမျိုး .လို လိုလို..မလိုလို
ပြည်သူတင်သူတွေ က..ပုတ်သင်အအ လို..
မဲဆို က…မဲမဲမှောင်…ကန့် ကွက်ကြ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:50 PM 1 comments
ကြိုက်ရင် ဖြူ။ မကြိုက်ရင်မဲ
မကျေနပ်ရင် ပြောဖို့ 
ဗူးဆို့ နဲ့ ပိတ်မရ။
ခလေး တောင် မကျေနပ်ရင် ငို..
ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ..
ခေါင်းမြီးခြုံ သတို့ သမီး..
ဘာပုံကြီးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ယူရတော့မလား။
ဘာတွေပါသလည်း အရင်မှ မချပြရဲ..
ပေးမဖတ်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲ ခံရဲ
ဗမာပြည်.. အမှောင်ထဲ တသက်လုံးဘဲနေ။
မဲလာထည့်မဲ့ သူလူ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ၁၀၀% အဖြူ ပြ.
ဒို့တတွေ အရှုံးရဦးမယ်။
သို့ သော်လည်း..နိုင်ငံတကာရဲ့ ကန့်ကွက်
ပါတီ အဖွဲ့ အစည်းများ ကန့် ကွက်
အဖွဲ့ အစည်းများရဲ့ စောင့်ကြည့်ချက်
ပြမရရင်.. နောက်ဆုံး မိနစ်ကျ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:27 AM0comments
ကောင်းလိုက်ပါတဲ့ သူ့ ရွှေဥာဏ်တော်..
Living Color က ညီမောင်.
နံမည်ကြီးချင်ဇောနဲ့ သိပ်မကြောင်ပါနဲ့ 
ဒို့ ပြည်သူမသိဘူးမထင်နဲ့ 
ဒီထက်များ.တော့ ဒို့ သဘောထားမကြီးနိူင်..
ဒုတ်ဆို ဒုတ်..ဓါးဆို ဓါးနဲ့ရင်ဆိုင်။
ဒါ ကြောက်တာပြချိန် မဟုတ်တော့ဘူး။
" စစ်အစိုးရရဲ့အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံရမတဲ့၊
ရွေးကောက်ပွဲမှာ တဝက်ပဲ မဲရွေးကောက်ခံ ဝင်ပြိုင်ရမတဲ့၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အတိုက်အခံဘဝတွင် ၅ နှစ်နေ၊
၅ နှစ်ကလေးတောင်..မကြံစည်မိသေးတဲ့ အကြံ..
ဘယ်သူက..နအဖ ရဲ့ အလံရှူး။
၈၈၈၈ ကျောင်းသားများတွေ အော်မိတာနဲ့ထောင်ထဲနေ.
ဦးဏှောက်ကလေး. ကြွက်လက်တဆုတ်စာနဲ့ ..
လူကြီးတွေနားမလာနဲ့ ..နိူင်ငံရေးဝင်မပါနဲ့ 
မေတ္တာပို့ သူ ဘုန်းကြီးရဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲ
နိုင်ငံရေး ခွပ်ကွင်း အတွင်း
မင်းသားလုပ်ဖို့ မဖြစ်လို့ လူကြမ်းတက်လုပ်..
တပြည်လုံးရဲ့ အနာဂတ်ရှေ့ ရေး..
မသဒ္ဓါ ( ၃။၁၆။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:31 PM 1 comments
အားပေးလက်နဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်
အများ၏ လေးစား ကြည်ညိုမှု
ကြွခဲ့ပါ..အရှေ့ မှာ ဒေါင်းလံထူထားသည်။
လာ..အရှေ့ သို့ ဆက်လျှောက်ကြမည်။
မသဒ္ဓါ (၃။၁၃။၂၀၀၈) ဓါတ်ပုံကလေး ကိုကြည့်မိ၍ ခံစားထားပါသည်။ သုံးခွင့်ပေးသော.ကိုမိုးသီး အားကျေးဇူးပါ.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:29 PM0comments
ခြုံစရာစောင် က နတ္တိ.
ညစ်ပတ် ကျင်ငယ်နံ့ နံ အိမ်သာမရှိ
" မင်း "ဆိုတဲ့ ဘေးအန္ထရာယ်
မင်းကို..ဒို့ မလိုတော့ဘူး သူငယ်ချင်း။
လူမြတ်.. လူသန့် 
သာသနာတော်နဲ့နိူင်ငံတော်ဘက်ကရပ်
မသဒ္ဓါ ( ၃။၀၉။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:40 PM0comments
အနိုင် နဲ့ အရှုံး..
အချစ် နဲ့ အမုန်း..
ဘယ်သူမှ တသက်လုံး။ စင်ပေါ်မှာ မနေ..
ငါမှ ငါမှန်..ငါအတ္တ ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်..
အောင်မြင်ချိန်မှာ မြူး..ကျေးဇူးရှိသူများ ပစ်ပယ်ဘူး.
အောင်မြင်ဘူးတဲ့ အဖြစ်. မူးကို မြစ်ထင်.
ငြိမ်းချမ်းရေး တေးဆို..တောင်းပန်စဉ် ခဏ
မေတ္တာ နဲ့ ချူ..မေတ္တာကို ယူသော်မရ..
ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ သွေးကြွေး ကြိုက်ရာတခုခု
ထွက်လမ်းမရှိ. ချောင်ပိတ်ကာ အမိဖမ်း
သူများကို လိမ်ညာထားရင်..သင့်နံမည်ဟာ ညစ်ထေး
ဆွေးရတက်နဲ့သွေးစက်လက်..မျက်ရည်လည်လည်.
ဒါ..သစ္စာဖောက်တို့ ၏ လားရာလမ်းဖြစ်သည်။
မသဒ္ဓါ ( ၃။၈။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:20 PM0comments
ခလေး ပွေ့ သောလက်
ခင်ပွန်း လင်သား ပြုစု ယုယလက်
မိသားစု ပေါ်ချစ် တဲ့ မေတ္တာ.
နိူင်ငံအပေါ်ထား တဲ့ စေတနာ
မိသားစု အပေါ်စွန့် လွတ်ချစ်တတ်တဲ့
အာဇာနည် မိန်းမမျိုး ဆိုတာဟာ..
မောင်ရေ..မိသားစုကို မငဲ့နဲ့ 
နို့ စို့ သမီးရယ်..
နို့ ချို မတိုက်ဘဲ. မေမေစွန့် ။
ပြည်သူ သို့ စတေး..အသက်ဝိညာဉ်တစ်ခု
ဤ သို့ သော..စွန့် လွတ်ခြင်းများနဲ့ 
မနီလာသိန်း၊ မဖြူဖြူသင်းနှင့် ၊ မစုစုနွေး၊
ဗမာတို့ ရဲ့ ကုမ္မာရီ..ရဲရင့်သွေး
ချက် နိုင်ငံ People in Need အဖွဲ့ကပေးတဲ့
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် “Homo Homini “ ရဲ့
ကူညီဆုတ်ထား၊ ပြည်သူများရဲ့ လက်ကမ်း
တော်လှန်ရေး မည်သည်..စွန့်လွတ်မှ အောင်မြင်တတ်မှန်း
ဒို့ မျှော်မှန်းပန်းတိုင်..ရှေ့ နားဆီ လက်တစ်ကမ်း
နေ၏ ဇာခြည်...အရှေ့ ဆီသမ်းပါပေါ့..
မမနှင့် တကွ..ပြည်သူတရပ်လုံး၏ နှလုံးသားတွင်းမှ.လှိုက်လှဲ ချစ်ခင်..၀မ်းသာစွာ..ဂုဏ်ပြုပါသည်..ညီမလေးများ..
ဓါတ်ပုံ ကို ဧရာဝတီ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:58 PM0comments
မရပ်နားတဲ့ ခြေလှမ်း..ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ လမ်း..
ရှေ့ သို့ လှမ်း…
မိုင်( ၃၀၀၀) ခရီး
ဤ ခရီးနီး ပါသလား.
မြန်မာပြည် မြောက်ဖျားမှ. တောင်ဖျားဆီ
မိုင်ပေါင်း (၁၂၇၅) မိုင်သာရှိသည်။
အနာဂတ် သမိုင်းတွင် .
အေသင် နှင့် ဇော်မင်းထွေး
ငြိမ်းချမ်းရေး ရဲ့ ခရီးသည်။
တစ်ရက်တစ်ရက်..ရှေ့ သို့ ဆက်နေ..
တနေ့ တလံ..ပုဂံရယ် ဘယ်မပြေး
ယောက်ျားကောင်းတို့ ၏ ဇွဲ။
ခွပ်ဒေါင်းတို့ ၏ ရဲသွေးနီ..
မသဒ္ဓါ ( ၃။၇။၂၀၀၈) ဂုဏ်ယူပါသည်။ မောင်လေးများ..မြန်မာပြည်သားဖြစ်ရတာ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:32 PM2comments
နှစ် (၂၀) ကြာမြင့်စေ..ယနေ့ တိုင်သတိရနေ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:20 PM0comments
တို့ တိုင်း တို့ ပြည်
ရေချို သောက်ရန်၊ မြစ်ချောင်းကန်နှင့်
တောက ပြိတ္တာ၊ ဖြစ်မည်တည်း။
ထလော့ မြန်မာ၊ မြန်မာထလော့၊
အားမပျော့နှင့်၊ မလျော့ လုံ့ လ
လက်ရုံး များမြောင်၊ ဉာဏ်များမြောင်နှင့်
ထားလော့ တာဝန်၊ ဉာဏ်ရှေ့ ပန်း၍
တ၀မ်း တစိတ်၊ ညီစေသတည်း။
http://dawngwincamp.blogspot.com/2007/08/blog-post_24.html မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:30 PM0comments
ကိုယ်ဖာသာ အယ်ဒီတာလုပ်၊ ကိုယ့်ဖာသာ စနက်တံ ဖြုတ်တဲ့သူ
ဒီလောက် စီစစ်တဲ့ ကြား..
“အာနာ (ဏာ) ရူးကြီး၊ မှူးကြီးသန်းရွှေ” အစ စာလုံးနဲ့ 
ယုံကြပါသလား မိတ်ဆွေတို့ 
အယ်ဒီတာ ရာထူးနဲ့ မတန်လေချင်း။
စာပေစီစစ်ရေး က ပယ်ချ..
တခုခု မှားနေပြီ မိတ်ဆွေ..
ကိုယ့်ရဲဘော်ရဲ့ ကလောင်နံမည်တချောင်းကိ်ု မရောင်း
အမည်ရှိ..ညိုမြ၏ အိုးဝေ က ဆောင်းပါး
ကာကွယ်ပေးသူ အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း..
ငါ့ ပိုက်ဆံရှိ ငါ့ ဂျာနယ်ငါ ထုတ်..
ငါ အယ်ဒီတာ လုပ်မယ်..
နုံနဲ့တဲ့ နှလုံး သား..
အရှက်မဲ့တဲ့ သူ့စိတ်ထား
သူ မဂ္ဂဇင်းတွေ သပိတ်မှောက်ထား။
ဒီလို လူများ..ဗမာအသိုင်းအ၀န်းနဲ့ မတန်
တောမုဆိုး..လူငနွား အမည်က မြတ်ခိုင်.
ဘယ်လောက် တာဝန်ကင်း.တရားမဲ့ ကင်းစွာ ပြောရဲ
သူ့ ဖာသာ..သူ သတ်ခဲ့ပြီ။
မသဒ္ဓါ ( ၃။၂။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:39 PM0comments
ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ ဗမာ့မှတ်တမ်း ( By ko Myoe)
နှစ်အဆက်ဆက်..လွတ်မြောက်ရေးအတွက်..ရင်းနှီးခဲ့ရသော..တော်လှန်ရေးသမားများ၏..သွေးစက်များသည်..ယနေ့ တိုင်.စိုဆဲ..စိုမြဲ.. စိုလတ္တံသာဖြစ်သည်။
မြန်မာ့တော်လှန်ရေးအဆက်ဆက်တွင် သင်၏ ဘိုးဘွားများလည်းပါဝင်ခဲ့ဘူးပါသည်။
ယခု..သင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချိန်ရောက်လာပါပြီ။
သမိုင်းအတွက်..သင်၏ သွေးသစ္စာပါဝင်နိုင်ပါစေ။ သင်၏ သမိုင်းပေးတာဝန်တရပ်ဖြစ်သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:44 PM2comments
Labels: Politics, Truth, video
မြန်မာပြည် မှာ..စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် ဆုံးရူံးမှူများကို..ကာကွယ်ရန်နှင့်..ဖမ်းဆီးခံ မီဒီယာသမား များကို ကယ်တင်ပေးရန်.အကူအညီ တောင်းခံပါသည်။ လက်မှတ်ကလေးများ ထိုးပေးခဲ့ကြပါရှင်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:56 PM0comments
တွေဝေရ ဖို့မဟုတ်တော့ဘူး
ရန်ဖြစ်နေရ မဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူး
ငြင်းခုန်နေရ မဲ့ အချိန် မဟုတ်ဘူး..
ဆရာကြီးတွေ တသီးပုဂ္ဂလိက လုပ်
ငါမှ မှန်..မင်းက အကြံအဖန်
ဒါ လေကန်နေရ မဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူး။
မုံ့ ဆီကြော်က မရသေး..
ငါက ဘဲ..၈၈၈၈ ကျောင်းသား
မင်းက မျိုးဆက်သစ်များ..ရန်ဖြစ်မနေနဲ့ ။
မင်းသိတာ အလကား.ရန်ဖြစ်မနေနဲ့ ။
တစ်ရောင်ထဲသွေး နဲ့ တော်လှန်မဲ့သူ။
စစ်အာဏာရှင်အောက် ကျွန်လူသား.(သို့ ).
စိတ်ဓါတ် ကို အညွန့် ချိုး။ ကာမ ကိုခိုး
ဂုတ်သွေးကို စုတ်။ အသက်ကို ချိုးဖြုတ်.
မျက်နှာငယ်လေးများ နဲ့ အလုပ်လုပ်..
သင်ကြောက်နေ..သင့် မျိုးဆက်သစ်များ ဖာဖြစ်
အမှိုက်ပုံမှာ အမှိုက်ကောက်ရမဲ့သင့်မြေးကလေး
သင်လှုထားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း အမိုးနံရံဟောင်းလောင်း
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမရှိ။ မျိုးတုန်း နေကြောင်း ။
သင့်ဘိုးဘွား ကာကွယ်ခဲ့ အမိဗမာ.
သင်၏ နောက်တွန့် နေတဲ့ခြေလှမ်းချက်
သမိုင်းပေးတာဝန်။ ကျသမျှ ပုခုံးထမ်းယူ..
ကျမတို့ အားလုံးရဲ့ အာဏာရှင် ဘုံရန်သူ
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၉။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:18 AM0comments
မိုင် ၃၀၀၀ ကျော် လမ်းလျှောက်နေသူ ငြိမ်းချမ်းရေးသံ...